Banyere Anyị - Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co., Ltd.
Kedu ihe kpatara Huayuemei Lighting
Guangdong Huayuemei Lighting Technology Co., Ltd e guzobere na 2006. Huayuemei Lighting dị ka a Professional ikanam Light warara emeputa, Pụrụ iche na-emebe, na-amị ma na-ekesa ihe karịrị 10 afọ. Na 2,300 sqm nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Guangzhou, China.
Anyị nwere uru dị ukwuu na ịmepụta na ahụmịhe mmepụta, ogbako, mmemme, ndị na-ere ahịa.
:Kpụrụ: Ezigbo mma na ọnụahịa asọmpi, uru dị ukwuu maka ndị ahịa.
Ọmarịcha ọrụ azụmaahịa na azịza kachasị mma maka ndị ahịa.
Echiche ngwaahịa dị mma nke kacha arụ ọrụ, na-adọrọ mmasị ma baa uru.
Anyị na-anabata iwu OEM maka mkpa ndị ahịa pụrụ iche. Anyị ga na-azụlite ngwaahịa ọhụụ oge niile, bulie ogo ngwaahịa anyị ma melite ọrụ anyị.
Anyị nwere ndị otu siri ike iji mee usoro gị na oge nke ọma, nnyefe ndị ahịa na oge. Anyị nwekwara ụkpụrụ nrụpụta siri ike, jide n'aka na a na-eme ngwaahịa niile nke ọma na njikọ ọ bụla nke usoro mmepụta.
Huayuemei bụ ndị na-azụ ahịa ndị na-enye ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, gụnyere ndị na-acha ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, ọkụ na-acha ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, na-agbanwe agbanwe / na-acha ọkụ ọkụ, na-arụ ọrụ na Lighting ikanam na China kemgbe ihe karịrị afọ 10. Anyị nwekwara ahaziri nhọrọ iji nyere ndị ahịa aka ebuli ha ọkọnọ yinye dị iche iche ọwa.
Ndị ahịa anyị na-agbasi mbọ ike imeju ndị ahịa. Ọzọkwa, dabere na mmekọrịta chiri anya anyị na ndị ahịa, anyị nwere ike ịnweta ozi aka mbụ site na ahịa ma nwee ike ịhazi ya dịka arịrịọ pụrụ iche ndị ahịa. N'ime afọ 10, anyị nwere ahụmahụ na ODM yana OEM. Na anyị adịchaghị ngwaahịa na ọrụ, anyị ike ezi azụmahịa mmekorita ya na ndị ahịa na anụ ụlọ na esenidụt ahịa na-obi ụtọ na-anabata. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ihe anyị ma ọ bụ chọọ ozi ọ bụla ọzọ, biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ anya ịkwado gị na nso nso.
Anyị na-arụpụta ụlọ iji kwe nkwa ogo kachasị elu. Anyị ikanam warara ìhè bụ OA, Rosh na Mankeumman gbaara.
Ihe dị mfe bụ mantra anyị. Ihe ngwọta anyị dị mfe ịwụnye, dị mfe ịpịpụta ma dịkwa mfe ijikwa. Anyị ga-eme dị ka arịrịọ gị si emere gị ụzọ kacha mma.
Huayuemei Lighting bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe & ụlọ ọrụ mepụtara maka mkpa gị niile. Ihe okike na agba anyi ume.
Ndị ọrụ R&D anyị nọ n'ime ụlọ na-enyocha usoro ọhụụ ma mepụta ngwaahịa ọhụrụ maka mpaghara ahụ.
Anyị bụ ndị ọkachamara na nnukwu rollouts ekele anyị 2,300 sqm nke n'ichepụta ụlọ ọrụ dị na Guangzhou, China.
Anyị ga-enye dị elu na kacha mma ahịa-ọrụ.
N'ime afọ 14 nke ahụmịhe, anyị nwere ndị ahịa na mba 130 na karịa obodo 4,500.